Sabuurradii 47 SOM - Kanu waa sabuur ay reer Qorax u - Bible Gateway
Sabuurradii 46Sabuurradii 48
Sabuurradii 47 Somali Bible (SOM)
47 Dadyowga oo dhammow, kulligiin sacabka tuma,
Oo Ilaah cod guuleed ugu qayliya.
2 Waayo, Rabbiga ah Ilaaha ugu sarreeya waa cabsi miidhan,
Oo isagu waa boqor weyn oo dhulka oo dhan u taliya.
3 Isagu dadyowga wuxuu gelin doonaa hoosteenna,
Quruumahana wuxuu ka hoos marin doonaa cagaheenna.
4 Isagu dhaxalkeenna ayuu inoo dooran doonaa,
Kaasoo ah ammaanta Yacquub uu jecel yahay. (Selaah)
5 Ilaah qaylo buu la kacay,
Oo wuxuu Rabbiguna la kacay dhawaaqa buunka.
6 Ilaah ammaan ugu heesa, ammaan ugu heesa,
Ammaan ugu heesa Boqorkeenna, ammaan heesa.
7 Waayo, Ilaah waa dunida oo dhan Boqorkeeda,
8 Ilaah wuxuu u taliyaa quruumaha,
9 Dadyowga amiirradoodii oo dhammu waxay isu soo wada urursadeen
Oo isaga aad iyo aad baa loo sarraysiiyey.